कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? दुनियाँ चकित हुने यस्तो छ रहस्य ! - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? कतिपय कुराहरु यस्ता हुन्छन् जुन हामीले हरेक दिन देख्दै र भोग्दै आएका हुन्छौँ । तर ति कुराहरुको भित्रि रहस्य हामीमध्य धेरैलाई जानकारी नै हुँदैन ।
आज हामी त्यस्तै एक प्रशंगका विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ । दैनिक जीवनमा देखा पर्ने एक रोचक दृश्यका बारेमा तपाँईलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ । कुकुर के गाउँ, के शहर हरेक क्षेत्रमा पाइन्छन् । नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर नै कुकुर पाउँछन् ।
कुकुरका धेरै विशेषताहरु रहेका हुन्छन् । सुँध्ने क्षमताका आधारमा कुकुर उत्कृष्ट स्थानमा पर्दछ । विभिन्न अनुसन्धानका क्षेत्रहरुमा कुकुरको भुमिकालाई लिएर चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन । तर आज हामी त्यस विषयमा नभई कुकुरको अर्को एक रहस्यका बारेमा बताउँन जाँदैछौँ ।
प्रायः कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा उचालेका हुन्छन् । सबैले देख्दै पनि आएका छौं तर कुकुरले यस्तो किन गर्छन् भन्नेमा हामी अनभिज्ञ छौं । यसबारे विभिन्न किसिमका तर्कवितर्क भएपनि वैज्ञानिक कारण भने अलि फरक रहेको छ । कुकुरको पिसाबको गन्ध कडा र व्यापक हुन्छ । उनीहरुले आफ्नो गन्ध त्यस्ता ठाउँमा छोड्छन् जुन ठाउँमा अरु कुकुरले सजिलै सुँध्न सक्छन् ।
यसरी पिसाब फेरेर गन्ध छोड्ने क्रममा त्यो क्षेत्रमा उक्त कुकुरको धेरै ठूलो भयानक राज छ भन्ने देखाउछ । त्यसकारण कुकुरहरु सकेसम्म धेरै माथिसम्म पिसाब गर्छन् । पिसाबले गर्दा कुकुरलाई आफ्नो सीमा निर्धारण गर्न सहज हुन्छ । यसरी माथिसम्म पिसाब फेर्न चार खुट्टा टेकेर हिंड्ने कुकुरलाई एउटा खुट्टा उचाल्दा अलिकति ढल्केपछि सम्भव हुन्छ ।
कुकुरको फेरोमोन हर्मोन नामक रसायन हुन्छ । यसले कुकुर महिला, पुरुष वा उस्को आहारका बारे पनि सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । पिसाबको गन्ध एउटा कुकुरको पहिचान हो । रोचक कुरा के भने हरेक कुकुरको पिसाबको गन्ध भिन्नभिन्नै हुनेगर्छ ।